मिनु मगर र गणेश अधिकारीको आवाजमा “ तिम्रो आयु“ हेर्नुहोस भिडियो सहित - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper मिनु मगर र गणेश अधिकारीको आवाजमा “ तिम्रो आयु“ हेर्नुहोस भिडियो सहित	मिनु मगर र गणेश अधिकारीको आवाजमा “ तिम्रो आयु“ हेर्नुहोस भिडियो सहित - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper मिनु मगर र गणेश अधिकारीको आवाजमा “ तिम्रो आयु“ हेर्नुहोस भिडियो सहित
रोशन पोखरेल, काठमान्डाँै , मंसिर १६
नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा मौलिक लोक लयमा आधारित गीतहरुको अभाव भै रहेको अवस्थामा नयाँ सालैजो भाकामा आधारित गीत महालक्ष्मी म्युजिक प्रालीको प्रस्तुतीमा मिनु मगर र गणेश अधिकारीको आवाजमा “ तिम्रो आयु“ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
बनपाखामा र गाउँघरमा आपसी दुख सुखका कुराहरु सुनाउनको लागी सालैजो भाकामा गाउँघरमा आपसी रुपमा मनोरञ्जन प्रद्धान गर्नको लागी गीत गाउने गरिन्छ । गीतमा सुनिल केसीको शब्द तथा गणेश अधिकारीको लय सिर्जना रहेको छ । सागर गौत्तमको छायाँकन ,दिपक विष्टको सम्पादन , काजिश श्रेष्ठको निर्देशनमा भिडियो निमार्ण गरिएको छ । “ तिम्रो आयु“ गीतमा काजिश श्रेष्ठ र रिना थापा मगरको अभिनय तथा नित्य रहेको छ ।
“ तिम्रो आयु“ हेर्नुहोस भिडियो